युटुबमा ‘धनपति’ किन रिलिज नहुने ? « Mazzako Online
युटुबमा ‘धनपति’ किन रिलिज नहुने ?
युटुबको क्रेज बढ्दै गएको अवस्थामा यो संजालबाट पनि लाखौ दर्शक नेपाली फिल्मले प्राप्त गरिरहेका छन् । तर, युटुबमा फिल्म आइहाल्छ नी भनेर सोच्दा दर्शक हलमा जान छाडेकी हुन् कि भन्ने अड्कल पनि काट्न थालिएको छ । सायद, यही भएर हुनसक्छ, फिल्म ‘धनपति’को निर्माणपक्षले यो प्रोजेक्टलाई युटुबमा रिलिज नगर्ने भएको छ ।
राजनीतिक विरासत बोकेको ‘धनपति’को कथामा तयार भएको यो फिल्मको बिषयवस्तु गम्भिर भएकाले हलमै गएर हेर्न र बहस गर्न निर्माणपक्षले आग्रह गरेको छ । निर्माणपक्षले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘पौडी आखिर पौडी नै हो ।
तर, बगिरहेको पानीमा खेल्नुको अवरदार मज्जा जमेको स्विमिङ पूलमा हुँदैन । यसैले, धनपतिको प्राविधिक पक्षको समेत रस लिनका लागि हलमै हेर्न आग्रह गर्दछौ ।’ असार २३ गतेबाट रिलिज हुन लागेको यो फिल्ममा खगेन्द्र लामिछाने, सुरक्षा पन्त, आशान्त शर्मा लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका छ । फिल्मको छायांकन तथा निर्देशन दीपेन्द्र के खनालले गरेका हुन् ।
यो फिल्मको प्रिमियरका लागि कलाकार खगेन्द्र लामिछाने र निर्देशक दीपेन्द्र के खनाल अमेरिका पुगेका छन् । उनीहरु, असार २२ गते मात्र नेपाल फर्कनेछन् ।